Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo markale ku wadahadlaya Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya, Dr. Kani Torun ayaa sheegay in 28-ka bishaan April uu dalkiisa mar kale ka furmi doono wareeg kale oo ay ku wada hadlayaan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ee gooni u goosadka ah.
Danjire Kani Torun oo u warramay VOA ayaa sheegay in dowladda Turkigu sii wedi doonto dhexdhexadinta dowladda Fedelaaka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Wuxuu sheegay danjire Kani Torun in wadahadalka labada dhinac aan laga sugeyn in deg deg looga gaaro natiijo kama dambeys ah, hase ahaatee ay sii wedayaan isku dubaridka kulamada labada dhinac si aakhirka looga gaaro natiijooyin wax ku ool ah.
Dr. Kani Torun ayaa sheegay in wadahadalladii labada dhinac ee ka dhacay Turkiga laga gaaray natiijooyin ay ka mid ah yihiin in maamulka hawada laga soo wareejiyo Kenya oo labada dhinac isla maamulaan iyo in la cambaareeyey xasuuqii dowladdi milaterigu woqooyi ka geystay sideetameeyadii.
Turkiga oo shaaciyey lacagta uu ku kabayo miisaaniyadda dowladda Soomaaliya 2014